प्रविधि – Page2– Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
४ आश्विन २०७७, आईतवार ०७:४३ English
सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन, ‘जथाभावी एप्स प्रयोग नगर्नू’ १२ असार २०७७, शुक्रबार १९:३०
मलविना नै रोपाइँ १२ असार २०७७, शुक्रबार ०९:१५
गुलरिया, १२ असार: धान खेतीका लागि आवश्यक रासायनिक मल पाउन नसक्दा बर्दियाका किसानले मल प्रयोग नगरिकनै धान रोप्नुपरेको छ । देशकै अन्न भण्डारका रुपमा चिनिने बर्दियामा खेतीका समयमा मलको अभावले किसानले मल प्रयोग नगरी रोपाइँ गर्दैछन् । वर्षा शुरु भएसंँगै धान रोपाइँका लागि किसानले..
अनलाइनमार्फत ठगी गर्ने ७ जना पक्राउ १० असार २०७७, बुधबार २०:४७
काठमाडौँ, १० असार । अनलाइनमार्फत चिठ्ठा परेको म्यासेज पठाएर लाखौ रुपैयाँ ठगी गर्ने एउटा गिरोहलाई नै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । भाइबर, वाट्सएप, इमो लगायत संजालको दूरुपयोग गरी ४० लाख रुपैयाँ ठगी गर्ने ७ जनालाई प्रहरीको अपराध महाशाखाले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा झापा भद्रपुर घर..
ट्विटरमा अब बोलेरै ट्विट गर्न सकिने ८ असार २०७७, सोमबार १३:५१
बीबीसी, ८ असार । माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरसँग प्रायः प्रयोगकर्ताहरुको गुनासो नै यो हुन्छ कि उक्त प्लाटर्फममा आफ्ना विचार तथा भावनाहरु व्यक्त गर्नका लागि केही सीमाहरु छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो अड्नच अक्षरहरुको सीमा हो । कहिलेकाहीँ २८० अक्षरको सीमाले निकै समस्या पार्दछन् र..
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको टावर भाँच्चियो २६ बैशाख २०७७, शुक्रबार ०९:५६
सुर्खेत, २६ बैशाख । हावाहुरीले सुर्खेतको हर्रेस्थित रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको टावरमा क्षति पुगेको छ । हुरीले रेडियो नेपालको एफएफ रिलेस्टेशन र टेलिभिजन दुवैको टावर भाँचेको हर्रेस्थित एफएम रिलेस्टेशनमा कार्यरत प्राविधिक मोहन केसीले जानकारी दिए । “जोडले चलेको हुरीबतासले..
रेडियो सञ्चालकहरुको माग, ‘विज्ञापन ९० प्रतिशत घटे, राहतको व्यवस्था गरियोस्’ १६ बैशाख २०७७, मंगलवार १३:०८
काठमाडौँ, १६ बैशाख । ‘रेडियो ब्रोडकास्टर्स फोरम’ले लकडाउन कारण एफएम रेडियोहरुले ब्यहोर्नु परेको समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । फोरमले कोभिड–१९ बाट एफएम रेडियो सञ्चालनमा परेको नकारात्मक प्रभावबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै राहतको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको..
सिजी टेलिकमलाई अर्थमन्त्रीको कटाक्ष, ‘काम नगरी अदालत धाउने ?’ २० फाल्गुन २०७६, मंगलवार ११:५९
निरोज कुमार थापा, काठमाडौँ, २० फाल्गुण । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एउटा काम गर्न इजाजत लिने र काम नगरी ओगटेर बस्ने परिपाटी देशव्यापी रहेको बताएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मन्त्री खतिवडाले चौधरी समूहको सिजी टेलिकम्युनिकेशन..
अर्थमन्त्रीले सम्हाले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी ११ फाल्गुन २०७६, आईतवार १५:४१
काठमाडौँ, ११ फाल्गुण । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद प्रकरणमा मुछिएपछि गोकुल बास्कोटाले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका खतिवडाले आइतबार पदभार ग्रहण..
सिजीलाई सरकारको प्रश्न, ‘सरकारी अनुदानबाट के के काम भए ?’ २ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १०:५८
काठमाडौँ, २ फाल्गुण । सिजी टेलिकमको लाइसेन्स विवाद सतहमा आएपछि सरकार र चौधरी ग्रुपबीच वादविवाद चुलिएको छ । सरकारले व्यवसायीक घराना चौधरी ग्रुपको स्वामित्व रहेको सिजी कम्युनिकेसनमाथि छानविन गर्ने संकेत गरेको छ । बिहीबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री..
सिजी टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज २१ माघ २०७६, मंगलवार १७:२७
काठमाडौँ, २१ माघ । नेपाल दूसञ्चार प्राधिकरणले सिजी कम्युनिकेशन प्रा.ली.को अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । प्राधिकरणले सूचना जारी गरेर सिजीको अनुमतिपत्र खारेज भएको जानकारी दिएको छ । चौधरी समूहको स्वामित्वमा रहेको सिजी कम्युनिकेशनले अनुमतिपत्र नविकरण नगरेको भन्दै प्राधिकरणले खारेज..
‘फोन ट्यापिङ’ गर्ने भनिएको नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा के छ ? १५ पुष २०७६, मंगलवार १३:५४
काठमाडौँ, १५ पौष । राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सदस्य प्रकाश पन्तले एउटा भनाई राखे । ‘सरकारले श्रीमान श्रीमतिका कुराकानी पनि सुन्ने भयो’ उनले भनेका थिए । यो भनाई हाल चर्चामा छ । ‘विदेशमा भएका सबै नेपालीहरु अब घरपरिवारसँग खुलेर कुरा गर्न पाउने छैनन् । बिहे..
बेला बेलामा बत्ती जाने समस्या समाधानको खोजीमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङ १३ पुष २०७६, आईतवार १२:०४
रासस, १३ पौष । विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य भएको लामो समय भए पनि राजधानीमा पछिल्लो दिनमा अनियमित तरिकाले विद्युत् काटिएको छ । यो विषय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि चुनौती मात्रै नभई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । विद्युत्भार कटौतीको अन्त्यपछि पनि किन यस्तो अवस्थाको सिर्जना भयो होला..
कम्प्युटर एशोसिएशन नेपालको अध्यक्षमा कुँवरको उम्मेदवारी २७ कार्तिक २०७६, बुधबार १०:०४
काठमाडौँ, २७ कार्तिक । सूचना प्रविधि व्यवसायी नवराज कुँवरले कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल (क्यान) महासंघको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । वर्तमान क्यानको वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका उनले संस्थाको २६ वर्षे इतिहासमा उपत्यका बाहिरबाट पहिलोपटक नेतृत्वमा दाबेदारी प्रस्तुत गरेका..
क्यानमा कुँवर समूहको उम्मेदवारी घोषणा २७ कार्तिक २०७६, बुधबार ०२:०३
काठमाडौँ, २६ कात्तिक । कम्प्युटर एसोसिएशन नेपाल महासङ्घ (क्यान) को आगामी मङ्सिर ७ गते हुने १३औँ कार्यसमिति निर्वाचनमा नवराज कुँवर समूहले उम्मेदवारी घोषणा गरेको छ । आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा कुँवर समूहले १४ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै उम्मेदवारी घोषणा गरेको हो । घोषणा..
२३ देशका वैज्ञानिकले भाग लिएको सम्मेलनमा नेपालले जित्यो स्वर्ण पदक ४ कार्तिक २०७६, सोमबार १८:०६
काठमाडौँ, ४ कार्तिक । रुसमा सम्पन्न ८ औँ एशिया व्यासिफिक योङ्ग साइन्टिस्ट कन्फ्रेन्समा नेपाली वैज्ञानीकले स्वर्ण पदक जितेका छन् । २३ राष्ट्रका प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै नेपाली युवा वैज्ञानिकले स्वर्ण पदक जितेका हुन् । नेपालको तर्फबाट सहभागी ९ विद्यार्थीमध्येसाउथवेस्र्टन..